China Infrared Thermopile Sensor for contactless Temperature Measurement STP9CF55 mpanamboatra sy mpamatsy | Masoandro
Infrared Thermopile Sensor for contactless Temperature Measurement STP9CF55
Ny sensor STP9CF55 thermopile infrared (IR) ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandray dia sensor thermopile
ny fananana herinaratra famantarana fivoahana mifanitsy mivantana amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Misaotra ny
famolavolana fanelingelenana anti-elektromagnetika, STP9CF55 dia matanjaka ho an'ny tontolo tontolo fampiharana rehetra.
Ny sensor thermopile infrared STP9CF55 ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy contacet dia sensor thermopile ny fananana herinaratra famantarana fivoahana mifanitsy mivantana amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Misaotra ny
Ny STP9CF55 misy karazan-tsivana sensor thermopile mifanaraka CMOS vaovao dia misy fahatsapana tsara, coefficient hafanana kely ny fahatsapana ary koa ny reproducibility avo sy azo itokisana. Famerana avo lenta thermistor referansa puce dia natambatra ihany koa ho an'ny onitra ambient mari-pana.
Ny sensor thermopile avo lenta an'ny Sunshine dia misy ao amin'ny trano TO-46, TO-5 ary SMD mora vidy. Izy ireo dia miovaova arakaraka ny haben'ny faritra misy ny sensor sy ny karazany onenana. Miaraka amin'ireo karazana sensor namboarina manokana. Sunshine dia manome vahaolana ho an'ny thermometry (fananganana Isothermal), fandrefesana tsy misy fifandraisana (solomaso natsangana) na Gas Monitoring (varavarankely roa tery, fivoahan'ny fantsona roa). Ny foto-kevitry ny sensor ISOthermal tsy manam-paharoa dia mampiavaka tsara ny fianakavian'i Sunshine thermopile amin'ny alàlan'ny fampiasana fananganana manana patanty mba hanatsarana ny fahombiazan'ny asa sy ny fandrefesana amin'ny toe-javatra mihorakoraka.
Ny fihenjanana ambonin'ireo naoty farany ambony indrindra dia mety hiteraka fahasimbana amin'ilay fitaovana. Aza aseho amin'ny deterta mahery setra toa ny Freon, Trichlorethylene, sns. Ny fametahana tanana sy ny fametahana onja dia azo ampiharina amin'ny mari-pana 260 ° C ambony indrindra amin'ny fotoana onenana latsaky ny 10 s. Sorohy ny fiakaran'ny hafanana eo an-tampon'ny sy ny varavarankelin'ny detector. Tsy tokony hasiana soldering reflow.
Toetra mampiavaka ny herinaratra (TA = + 25 ℃, raha tsy misy fanamarihana hafa.)
Teo aloha: Volavola manokana ho an'ny sary momba ny maripanan'ny vatana - mari-pana momba ny maripana tsy misy fatrany MSA Module Sensor infrared thermopile ho an'ny rafitra fanaraha-maso fidirana - Masoandro
Manaraka: Sensor Thermopile tsy mitongilana avo lenta ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandray STP9CF55H